Kali Linux ikozvino inowanikwa mune yepamutemo Windows 10 chitoro | Linux Vakapindwa muropa
Pakukumbira kwenharaunda, nhasi Microsoft yaita kuti zvikwanisike dhawunirodha uye gadza Kali Linux zvakananga kubva kuofficial Windows 10 chitoro, ichi sechikamu chechinhu chitsva "Linux Subsystem yeWindows 10 ", iyo inofanirwa kuvhurwa kana iwe uchida kumhanya Linux paPC yako.
Tara Raj, maneja wechirongwa akataura kuti "Nharaunda yakaratidza kufarira kukuru kushandisa Kali Linux kuWSL (Windows Subsystem yeLinux), saka tinofara kuzivisa kuiswa kweiyi unix system muchirongwa."
Maitiro ekumhanyisa Kali Linux pane Windows 10
Kugonesa iyo Linux Subsystem chimiro che Windows 10, zvese zvaunofanirwa kuita kuvhura iyo PowerShell semubati uye ita unotevera kuraira:
Bvumira-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Windows-Subsystem-Linux
Paunenge iwe uchingoita, iwe unongoda kutangidza komputa yako uye enda kune yepamutemo Windows 10 chitoro kurodha pasi nekuisa Kali Linux.
Ehezve uchafanirwa kuve neazvino Windows 10 kugadzirisa. Kamwe Kali Linux yaiswa mukati meWindows iwe unogona kuitangisa kubva kune yekutanga menyu. Koni inotanga nekukasira kupedzisa kumisikidza uye kutanga iyo system.
Kali Linux ikozvino yave kuwanikwa muMicrosoft App chitoro - https://t.co/taJFpNCfU9 uye https://t.co/PGuIxDn7pd | Kutenda kukuru uye kuonga ku @tara_msft uye @bhenhillis yekuita izvi kuti zviitike!
- Kali Linux (@kalilinux) 5 March we2018
Paunenge iwe wawedzera yako yekupinda ruzivo, iwe unozogona kunakidzwa neiyi huru yekupinda kuyedzwa uye yetsika yekugura chishandiso yakananga kubva kuWindows 10. Pamusoro peKali Linux Unogona zvakare kurodha pasi nekuisa Ubuntu uye OpenSuSE kuburikidza nechirongwa chimwe chete ichocho.
Kali Linux inozivikanwa zvikuru neDebian-based Linux kugovera iyo ine yekuzvivandudza-yega ficha, zvinoreva kuti kana ukangoiisa iwe haufanire kuidzokorora. Iyi sisitimu inogadzirwa neboka Kuchengetedza Kunogumbura, timu yevagadziri vakambogadzira Kudzoka, iyo yekutanga yetsika kubiridzira uye kupenengura kuyedza kugovera uko kwakazopa nzira yeKali Linux.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Kali Linux ikozvino inowanikwa mune yepamutemo Windows 10 chitoro
Izvi zvinongobatsira chete avo vanoda kuyedza / kubvarura wifi network vasina kusiya Windows.
Kune vashandisi veGGU / Linux izvi hazvitibatsire zvachose.
Ini handidi "mubatanidzwa" pakati pemarara emawindo uye kushamisa kwegnu / linux zvachose.